Pacman 6.0, kubva kuArch Linux, inobvumidza kurodha pasi panguva imwe chete | Linux Vakapindwa muropa
Rinopfuura gore rapfuura, Arch Linux yakakanda iyo yekupedzisira svikiro, kwete kunongedza, kugadzirisa kwepakeji maneja wako. Pakati pezvinhu zvaro zvitsva takawana mamwe sekuwedzera kweiyo zstd algorithm iyo, kana ichienzaniswa ne "xz" algorithm, yakakurumidza kumanikidza kwepaketi uye kuburitsa, uku ichichengetedza iyo compression level. Tichitarisa kune ramangwana, rakapinda alpha chikamu Pacman 6.0, iro ramangwana guru rekuvandudza iro rinounza anozivikanwa maficha maficha
La alpha vhezheni Pacman 6.0 yakaburitswa maawa mashoma apfuura, uye ruzivo rwacho rwakatumirwa pa iyi inopinda kubva kuAllan McRae's blog. Iyo yakasarudzika yakasarudzika yakagadzirirwa kufunga nezve kuchengetedza nguva, chero bedzi internet yedu yekubatanidza yakanaka uye inotibvumidza kurodha mafaera mahombe munguva pfupi.
Pacman 6.0 ichaponesa nguva yekumisikidza
Kunyanya kutaura, hunyanzvi hwakakurumbira hweavo vanozosvika nePacman 6.0 ndivo zvakafanana kurodha pasi. Sezvatatsanangura, nekukwanisa kurodha akati wandei mapakeji panguva imwe chete, iyo nguva yekumisikidza ichadzikiswa, asi chete kana yedu internet yekubatanidza ichikwanisa kubata iyo yakawandisa kuwedzera muhuremu hwekutora zvakanaka.
Vashandisi vanofarira kuyedza ramangwana vhezheni yemaneja wepakeji vanogona kuzviita nekuvhura iyo terminal uye typing uyu wekuraira:
Asi zvinofanirwa kuve pachena kuti tiri kutaura nezve alpha vhezheni uye kuti matambudziko anotarisirwa, saka ini handikurudzire kuisirwa pamidziyo yekugadzira. Muzvokwadi, McRae pachake anonyevera izvozvo panogona kuve nezvinetso nevabatsiri veAUR yeshanduko dzakaunzwa muABI. Iko kune zvakare kune akati wandei nyaya nemutariri wekurodha, asi zvese zvikwata zvichagadziriswa pamberi pesimba vhezheni yacho yaburitswa.
Kana iwe uchida kuona iyo yakafanana kurodha pasi muchiita, unogona kuiwona mu vhidhiyo iyi iyo mushambadzi akaisa kuGoogle Drive.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Pacman 6.0, Arch Linux's package maneja, inobvumidza kurodha panguva imwe chete